Oduu sobaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 8:03 20 Waxabajjii 20218:03 20 Waxabajjii 2021
Tibba Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa gaggeessuuf jirtu kanatti fayyadamtoonni intarneetii muraasni wayita odeeffannoowwan qabiyyee fi himannaa dogongorsiisaa ta'an maxxansan mul'atu. Isaan keessaa muraasni kunooti.
...tti maxxanfame 4:20 24 Bitooteessa 20214:20 24 Bitooteessa 2021
Qondaala UN kan sobaa fi odeessaalee dogoggoraa biroo dhimma Tigraay
BBC Reality Check irraa
Kaaba Itoophiyaa Naannoo Tigraayitti muddamni ji'ootaan dura eegale ammallee itti fufuun, gabaasaaleen sarbama mirgootaafi kaanis dhagahamaa jiru.
...tti maxxanfame 4:34 22 Muddee 20204:34 22 Muddee 2020
'Lakki, Joo Baayidan paartii mormituu Yugaandaa deeggaraa hin jiru'
Maqaan pirezidaantii Ameerikaa filatamanii Jooy Baayidan filannoo Yugaandaa gaggeeffamuuf jedhu dursee odeeffannoo sobaatiif oolfame.
...tti maxxanfame 5:19 20 Sadaasa 20205:19 20 Sadaasa 2020
Lolli naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamu jabaatee wayita itti fufe kanatti, waayee lola adeemaa jiruu odeeffannoowwan nama dogoggorsaniifi gariinis soba ta'an tamsaasuuf yaaliiwwan walirraa hin cinnetu gaggeeffamaa jiru.
...tti maxxanfame 7:24 11 Sadaasa 20207:24 11 Sadaasa 2020
Lola Naannoo Tigraayitti adeemaa jiru irratti oduuwwan sobaa tamsa’aa jiran
Carraa lola naannoo Tigraayitti adeemaa jiru fayyadamuun namoonni oduu sobaa gama onlaayiniin tamsaasan jiru
...tti maxxanfame 8:07 23 Fuulbaana 20208:07 23 Fuulbaana 2020
Miseensi paarlaamaa maqa balleessiif beenyaa birrii mil. 22 ol argatte
Miseensi paarlaamaa Awustiraaliyaa fi abbaan warraashee himannaa maqa-balleessii irratti banamee tureef beenyaa birrii 22,608,000 badhaafamaniiru
...tti maxxanfame 3:48 18 Fuulbaana 20203:48 18 Fuulbaana 2020
Facebook haasawa jibbaafi oduu sobaa akkamiin to'ata?
Dhaabbanni Facebook wantoota barreessitan isin jalaa haqee beekaa? Maaliif isinitti fakkaata? Wanta sirrii miti jettan akkamiin gabaastu? Wanti tokko akka sirratu baay’isanii gabaasuun barbaachisaadhaa? Gabaasni kuni hubannoo dabalataa isiniif kennuu danda'a.
...tti maxxanfame 8:23 14 Waxabajjii 20208:23 14 Waxabajjii 2020
Oduun sobaa hangam jireenya nama dhunfaa burjaajjeessaa?
Oduun bakka isin hinjirreetti akka waan barreessitaniitti maqaa keessaniin baayyinaan qoodamaa jiru osoo isin mudatee tarkaanfiin jalqabaa fudhatan maal ta'a? Namoonni mudannoo akkasii qaban BBC'tti kan himan qabu dubbifahdaa.
...tti maxxanfame 5:14 6 Caamsaa 20205:14 6 Caamsaa 2020
Namoota gosa torba yaadaafi odeeffannoo dogogoraa Covid -19 irratti dabarsan
Waa'ee koronaavaayirasii namoota odeeffannoo dogoggoraa dabarsuu danda'an gosa torba.
...tti maxxanfame 8:02 29 Ebla 20208:02 29 Ebla 2020
Oduu sobaa jajjaboo afur koronaavaayirasiin wal qabatee Afrikaa keessa babal'achaa jiran
Biyyootii Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii dabalaa jira, mootummoonnis qajeelfama dhukkubicha ni ittisa jedhaman ciccimaa dabarsaa jiru.